वि. सं. २०७८ असार ६ गते, आइतवार - Enepalese.com
वि. सं. २०७८ असार ६ गते, आइतवार
इनेप्लिज २०७८ असार ६ गते १३:४९ मा प्रकाशित
२०७८ असार ६ गते, आइतवार, २० जुन २०२१। ज्येष्ठ शुक्लपक्ष दशमी तिथि (१२ः२७ बजेदेखि एकादशी)। चित्रा नक्षत्र (१५ः४६ बजेदेखि स्वाती)। चन्द्रराशि– तुला।
आज तपाईंलाई बाहिर सैर गर्नाले र आनन्दको सैरले राम्रो मुडमा राख्नेछ। अरूलाई प्रभावित गर्ने तपाईंको क्षमताले फाइदा पुर्याउनेछ। आज तपाईंलाई जीवनमा साँचो प्रेमको सम्झना आउँछ. चिन्ता नगर्नुहोस्, समय अनुसार सबै कुरामा परिवर्तन आउँछ, तपाईंको रोमान्टिक जीवन पनि त्यस्तै हो। आज तपाईंलाई धेरै रोचक निमन्त्रणाहरू आउनेछन् – साथै एउटा आश्चर्यजनक उपहार पनि पाउन सक्नुहुनेछ। तपाईंले आफ्नो जोडीबाट कम ध्यान दिइएको महसुस गर्न सक्नु हुनेछ, तर दिनको अन्तमा उनी तपाईंको लागि नै व्यवस्था गर्न व्यस्त थिए भन्ने बुझ्नु हुनेछ।
तपाईंको मुड परिवर्तन गर्न केही सामाजिक जमघटमा जानुहोस्। बच्चाहरुले यो दिन धेरै कठिन दिन बनाउन सक्छन्। तिनीहरूको चासो राख्न स्नेहको हतियार प्रयोग गर्नुहोस् र कुनै पनि अनावश्यक तनाउबाट जोगिनुहोस्। प्रेमबाट प्रेम फल्छ भन्ने याद राख्नुहोस्। तपाईंको प्रेमीकासँग केही भेद उत्पन्न हुन सक्छ – तपाईंले आफ्नो जोडीलाई आफ्नो स्थिति बुझाउने प्रयास गर्न गाह्रो पर्नेछ। सेमिनार र प्रदर्शनीहरूले तपाईंलाई नयाँ ज्ञान र सम्पर्क प्रदान गर्नेछ। आज तपाईंलाई एकजना आफन्तले आश्चर्य दिन सक्छ, तर यसले तपाईंको योजनामा बाधा पुर्याउन सक्छ।
स्वास्थ्य सम्बन्धित समस्याले असुविधा पार्न सक्छ। आर्थिक समस्याले तपाईंको निर्माणात्मक सोच्ने क्षमतामा हानि पुर्याउनेछ। परिवारका सदस्यहरूसँग शान्तिपूर्ण र शान्त दिनको आनन्द लिनुहोस् – मान्छे समस्याहरू लिएर तपाईंसँग आए भने – तिनीहरूलाई बेवास्ता गर्नुहोस् र यसले तपाईंको मन खिन्न पार्न नदिनुहोस्। रोमान्टिक मुडमा अचानक परिवर्तन हुनाले तपाईंलाई धेरै नराम्रो लाग्न सक्छ। आज अनुकूल ग्रहहरूले खुसी महसुस गर्ने प्रशस्त कारणहरू ल्याउनेछन्। वैवाहिक जीवनले केही नराम्रो प्रभाव लिएर आउँछ; तपाईंले आज यसको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
तपाईंले आराम गर्न सक्ने दिन हो। तपाईंका मांसपेशीलाई राहत दिन तेलले आफ्नो शरीरको मालिश गर्नुहोस्। तपाईंले बच्चाहरुसँग केहि समय बिताउनुपर्छ र तिनीहरूलाई मूल्यमान्यता सिकाउनु र तिनीहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारीको ज्ञान दिनु आवश्यक छ। आज आफ्नो प्रियको भावना बुझ्नुहोस्। तपाईंको वैवाहिक जीवन राम्रो बनाउने प्रयासले आज आशा गरेकोभन्दा राम्रो फल दिनेछ।
आजको मनोरञ्जनमा खेल गतिविधिहरु र घर बाहिरका कार्यहरू समावेश हुनुपर्छ। विभिन्न स्रोतबाट मौद्रिक लाभ हुनेछ। परिवारका सदस्यहरूसँग शान्तिपूर्ण र शान्त दिनको आनन्द लिनुहोस् – मान्छे समस्याहरू लिएर तपाईंसँग आए भने – तिनीहरूलाई बेवास्ता गर्नुहोस् र यसले तपाईंको मन खिन्न पार्न नदिनुहोस्। तपाईंला आफ्नो प्रिय फोन गर्नेछन्, यसैले यो राम्रो दिन हो। यात्रा र शैक्षिक गतिविधिहरूले तपाईंको जागरूकतामा बृद्धि गर्नेछ। तपाईं लामो समयबाट श्रापित महसुस गर्नु हुँदै थियो भने, आज तपाईं आशिष पाएको महसुस गर्नु हुनेछ।
आफ्नो बच्चाको कार्यले तपाईंले धेरै खुशी दिन सक्छ। तपाईंको आवश्यकताहरूको लागि तपाईंको भाइ तपाईंले सोचे भन्दा अझ बढी सहयोगी हुनेछ। तपाईंले कुनै वनभोज स्थलमा गएर आफ्नो प्रेमी जीवनलाई रोशन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंको वैवाहिक जीवन राम्रो बनाउने प्रयासले आज आशा गरेकोभन्दा राम्रो फल दिनेछ।
अरूसँग खुसी क्षणमा भागीदारी हुनाले तपाईंको स्वास्थ्य फूल्नेछ। तर सावधान रहनुहोस्। यदि यसो गर्नुभएन भने तपाईंलाई पछि समस्या हुनेछ। तपाईंले आज राम्रो पैसा कमाउनुहुनेछ – तर यसलाई आफ्नो हातबाट खस्न नदिने प्रयास गर्नुहोस्। यो अवधि आफ्नो नयाँ परियोजनाहरू र योजनाको सन्दर्भमा आफ्ना आमाबाबुलाई विश्वासमा लिनका लागि राम्रो छ। आज आफ्नो प्रियको भावना बुझ्नुहोस्। तपाईंको जोडी आफ्नो जीवनमा तपाईंको मूल्य वर्णन गर्दै केही सुन्दर शब्दहरू लिएर आउनेछन्।
आफ्नो कार्यालयबाट छिट्टै बाहिर निस्किनुहोस् र तपाईंलाई साँच्चै आनन्द आउने काम गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। घरेलू विषय र बाँकी रहेका घरेलू काम सक्ने अनुकूल दिन। आफ्ना जोडीको नराम्रो स्वास्थ्यले तपाईंको काममा रोकावट उत्पन्न हुन सक्छ, तर तपाईं कुनै पनि तरीकाले सबैको व्यवस्था गर्न सक्नु हुनेछ।
तपाईंको धैर्यलाई लगातार प्रयासको साधारण अर्थमा र समझसँग राख्नुहोस् जसले तपाईंको सफलताको ग्यारेन्टी रहनेछ। मान्छे तपाईंबाट के चाहन्छन् र के जरूरी छ भन्ने कुरा तपाईंले ठ्याक्कै थाहा पाउने जस्तो देखिन्छ तर आज खर्च गर्नमा त्यति धेरै उदार पनि हुने प्रयास नगर्नुहोस्। सकारात्मक र सहयोगी साथीहरूसँग बाहिर जानुहोस्। आफ्नो तालिकामा अन्तिम मिनेटको परिवर्तनहरूको कारणले तपाईंका यात्रा योजनाहरू सर्न सक्छन्। तपाईंलाई अंगालो मार्नुको स्वास्थ्य लाभ थाहा हुनुपर्छ। आज तपाईंले आफ्नो जोडीबाट पर्याप्त प्राप्त गर्नु हुनेछ।
तपाईंको भरोसा र ऊर्जा आज उच्च हुनेछ। बच्चाको अध्ययनलाई लिएर चिन्ता गर्न आवश्यक छैन। अहिलेको क्षणमा तपाईंले केही समस्याको सामना गर्नुपर्छ तर यी क्षणिक हुन र केही समयमा मरिहाल्ने छन्। गोप्य कार्यहरूले तपाईंको प्रतिष्ठा बिगार्न सक्छ। आफ्नो जोडीले तपाईंको कुनै योजना वा परियोजनामा बाधा पुर्याउन सक्छ; धैर्य नगुमाउनुहोस्।
तपाईंको भरोसा र ऊर्जा आज उच्च हुनेछ। टाढाका आफन्तले आज तपाईंसँग सम्पर्क गर्नेछन्। तपाईंको समर्पित र शुद्ध प्रेममा रचनात्मक शक्तिको जादू छ। आफ्नो बाटोमा आएका सबैलाई विनम्र र आकर्षक भइदिनुहोस् – केही चुनिन्दाहरूले मात्र तपाईंको जादूले भरिएको आकर्षणको रहस्य थाहा पाउनेछन्। तपाईंको जोडी साँच्चै नै तपाईंको लागि स्वर्गदूत हो, र तपाईंलाई यस कुराको आज थाहा हुनेछ।
काममा र घरमा केही दबाव पर्नाले तपाईंलाई छिट्टै रिसाउने बनाउँछ। आजैको दिनको लागि मात्रै बाँच्ने र मनोरञ्जनमा धेरै समय र पैसा खर्च गर्ने आफ्नो बानीमा नियन्त्रण गर्नुहोस्। आफ्ना छोराछोरीलाई तपाईंको उदार व्यवहारको फाइदा लिन नदिनुहोस्। तपाईंको प्रेमीले आज उपहारका साथ केही समयको आशा गर्न सक्छन्। तपाईं निष्कर्षको लागि हतारिनु भयो र अनावश्यक कार्यहरू गर्नुभयो भने यो एउटा दुखपूर्ण दिन हुनेछ। आज, तपाईं आफ्नो जीवनसाथीसँग बाहिर गएर रमाइलो समय सँगै बिताउनु हुनेछ।